The Irrawaddy's Blog: မင်းသမီးဖခင် သေကြောင်းကြံ
နံမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် သင်ဇာဝင့်ကျာ်၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဟောင်း (GSM) ဦးဝင့်ကျော်ဟာ ယမန်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မိမိကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံစဉ်ခဲ့ရာ မိသားစုဝင်များက အချိန်မီသိရှိကယ်တင်ခဲ့ ၍ အသက် ဆုံးပါးမှု မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဆေးရုံသို့ အချိန်မီ ပို့နိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်း အခြေဆိုက် သတင်းသမားများက ဆိုနေကြပါ တယ်။
အခုလို ဦးဝင့်ကျော်အနေဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ သေကြောင်းကြံခြင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမီးဖြစ်သူ သင်ဇာဝင့်ကျော်၏ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ကာလအတွင်းကမလုံမခြုံဝတ်စားဆင်ယင်မှုဖြင့်အင်တာနက်လူမှုစာမျက်နှာများမှာဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်နေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်မြို့မှာ ပြောဆိုဝေဖန်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမှန်တကယ် ဦးဝင့်ကျော်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် သေကြောင်းကြံခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အခုထိတော့ တိတိကျကျ မသိရသေးပါဘူး။
ကျနော့်အမြင်က celebrity တွေ ဒီလိုဝတ်တာမဆန်းပါဘူး
ခက်တာက ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့စည်းက
ဗုဒ္ဒဘာသာ ထိုင်းတို့ မှာလဲ ဝတ်နေကြတာပဲ
သူတို့ အဲလို ဝတ်လို့ ယဉ်ကျေးမှု မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး
ထိုင်က ဗမာလူမျိုးထက် ယဉ်ကျေးမှုစောပါတယ်
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်ကြတယ်
ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာ မလေးတွေကို ဆော်ဒီက အမျိုးသမီးလို အကုန်ဖုံးစေချင်နေတာလား
ပြီးတော့ သင်္ကြန်မှာ အပြတ်ဝတ်သူတွေကိုဝေဖန်တဲ့ FACEBOOK မမချောတွေက သူတို့ပုံကို FACEBOOK မှာ မလုံ့တလုံတင်ပြီး သူများ တွေကို ကဲ့ရဲ့တာ အံသြတယ်ဗျာ။
သင်္ကြန်မှာ ခုလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်တာ အရက်ကို ရောင်းခွင့်ပြုလို့ပါ
လူတွေ မမူးပဲ ခုလို ကဲရဲမှာမဟုတ်ဘူး
လူတွေက အရက် ကုမ္ပဏီကို အပြစ်မမြင်ပဲ တနှစ်တခါ ဝတ်ဆင်တာ ဆန်းတဲ့သူတွေပဲ အပြစ်တင်နေကြတယ်
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ဘယ်လောက်ပိတ်ပိတ် ရှိနေသလို ခုလို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝတ်စားဆင်ယင်သူဆိုတာလဲ အမြဲရှိနေမှာပါ
ဆော်ဒီလို သက်ဦးဆံပိုင် နဲ့ နိုင်ငံကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့
အဲလိုမဝတ်စေချင်ရင် လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေပြုပေါ့
ပြီးတော့ မြန်မာ ရာသီဥတုကလဲ အတို အပြတ်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် ကောင်မလေးတွေ အတိုဝတ်တာ မြင်တိုင်း ရာဃ စိတ်ကြွနေသူတွေ။
ကိုယ်တိုင်က သူများနိုင်ငံ ထွက်မကြည့်သူတွေ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲချင်တဲ့သူတွေက တော့ ကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး
မြန်မာမိန်းခလေးတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာ့ရာသီဥတုနဲ့လဲ သင့်တော်၊ ခေတ်နဲ့လဲ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်တဲ့အ၀တ်အစားမျိုးဘဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လဲ ၀တ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ၀တ်နေတာတွေက လွတ်လပ်တဲ့အဆင့်တင်မကဘဲ ဖော်နေတဲ့အဆင့်ထိ ဖြစ်နေတာပါ။ သူများနိုင်ငံမှာ ၀တ်တာတွေနဲ့ လိုက်ပြီး ယှဉ်ဖို့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ အခုပြောတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကကော ဘယ်လောက် ကောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံမို့ပါလဲ။ ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့ မြန်မာမလေးတွေကိုတော့ မနှိုင်းယှဉ်စေချင်ပါဘူး။ ဆော်ဒီလိုနေရမယ်လို့လဲ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကို ဖော်နေတဲ့အ၀တ်အစားမျိုး ၀တ်တာကတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံဖို့ မသင့်ပါဘူး။ အဲဒါကို ခေတ်နောက်ပြန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲ အခု နိုင်ငံခြားမှာ နေနေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်အရှက်တရားကို ဖော်တဲ့အ၀တ်အစားမျိုး မ၀တ်ပါဘူး။ ခေတ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့၊ ခေတ်မီတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုဘဲ ရှိပါတယ်။ အခု နိုင်ငံခြားမှာ နေနေတဲ့ တစ်လျောက်လုံး မြန်မာပွဲသွားတာမျိုးကလွဲရင် ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ လုံခြည်ဝတ်လေ့မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နေရထိုင်ရ လုပ်ကိုင်ရတာ လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့အပြင် ရာသီဥတုနဲ့လဲ မကိုက်လို့ပါ။ ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာမလေးတွေ ခေတ်နဲ့အညီ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့အညီ ရင်ပေါင်တန်းပြီး နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာက သိထားတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှူ မပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းရမှာကတော့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရဲ့ တာဝန်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သင်္ကြန်တွင်း အရက်ရောင်းတာ ခွင့်ပြုတာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ မှန်ပါတယ်။ အရက်သောက်လိုက်ရင် လူတွေရဲ့စိတ်ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက် ထိန်းသိမ်းရတာလဲ ခက်ခဲသွားပါတယ်။ အဲဒါကတော့ တာဝန်ရှိတဲ့ အစိုးရက နောက်နှစ်တွေမှာ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားရင်တော့ မြန်မာ့သင်္ကြန်ဟာ သရုပ်ပျက်သင်္ကြန် မဖြစ်လာတော့ဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။
မောင်ကောင်း( ရန်ဂွန်း) said... :
မောင်ကောင်းကတော့ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာကို အမြဲဦးထိပ်ပန်လျှက်ပါ၊ သို့သော် အထက်က (အပေါ်ဆုံးက) ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့ အယူအဆကို လုံးဝ ၁၀၀% လက်ခံပါကြောင်း၊ အမြင်မတူသူများကိုလဲ အပြစ်မမြင်ပါကြောင်းထပ်လောင်း တင်ပြရေးသားလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ။
Dawn Taker said... :
ုအပေါ်ကကောင် မင်း နှမတွေ၊ အစ်မတွေ အဲ့လို ဝတ်ခိုင်း။ အောက်ကသူကိုတော့ ကျေနပ်တယ်။
မလေးတို့ အော်စီတို့ ကကြီးတို့ဂငယ်တို့ကိုထွက်ကြည့်
မြန်မာပြည်ကလေယျဉ် စလုံးကိုဆိုက်ရင် လူတွေကို
ထားခဲ့တဲ့ ဘသန်းရွှေ နဲ့ငနေ၀င်းတို့ရေ..
တို့မြန်မာတွေနောက်ကျ တာ အ၀တ်အစားလည်းပါသဟေ့.
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ဘာဝတ်ဝတ်ကောင်းပါတယ်။ စကတ်ဝတ်ဝတ်။ ထဘီဝတ်ဝတ်။ ဒါပေမယ့်ပေါ့နော်။ လူပဲဗျာ။ ကိုယ့်အပြုအမူကကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ Club တွေမှာ တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးကဲချင်သလောက်ကဲပါ။ မိမိလူမျိုးတစ်ခုလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာတော့ဒီလိုမလုပ်သင့်ကြပါဘူး။ ဒီအမျိုးသမီးတွေ သူတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမှာအဲဒီ့လိုဝတ်ဆင်ပြီးဆင်နွှဲကြရဲ့ လားဗျာ။ မ၀တ်ကြပါဘူး။ ၀တ်ကြရင်လဲအဲဒီ့မင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်သူမှအထင်မကြီးသလိုကဲ့ရဲ့ ကြမှာပါ။ ကိုယ့်အပြုအမူ အပြောအဆိုက ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ - သားသားတို့ ခေတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလဲတစ်ခုပြောပါရစေ။ သားသားတို့ ခေတ်ဟာ ဖ ခေတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဗျာ။
ကိုချက်ကြီး said... :
မြန်မာသင်္ကြန်မှာ မြန်မာမတွေဖော်တာလောက်တော့ ထိုင်းမတွေက ပျင်းသနားတယ်
ဒါလေးဝတ်တာများ ချွှတ်ပြတာမှမဟုတ်တာ ဘုန်းကြိးကျောင်း ဘုရားကျောင်းသွားတာမှ မဟုတ်တာ
ဒါတောင် တော်တော် လုံနေသေးတယ် သူ့ နေရာနဲ့ သူပေါ့ နိုင်ငံခြား နိုင်ငံခြားနဲ့ ပြောနေကြတာ
နိုင်ငံခြား မှာလဲ ဘုန်းကြိးကျောင်း ဘုရားကျောင်း တော့ ဘယ်သူမှဒီလိုမ၀တ်ဘူးနိုင်ငံခြားဆိုတိုင်း ဖင်ပြောင်ပဲ မမြင်ယောင်နဲ့သူ့ နေရာနဲ့ သူဝတ်တတ်ဖို့ ပဲလိုတယ်
Ma Pee Naing Kya Tay bu Lar ? St. John Tun Shwe said... :
Khin Myar doth ko, bae thu ka Hma ' Ma Kyeet Khine bu ' .
It is ur choice.
don't be meddlesome with this matter too much.
Mind your own family and yourself.
some people will follow ur ways, others don't. It is their choice, as long as they are not breaking the law and trying to break the law.
The law maker and law enforcer exist. This is not crime.
If u say too much about' culture' ...well there is two options.
This will exist. And you dislike it. don't support it, then . u can comment to some extent. But don't be too fussy about this.
Or u have to change ur attitude to adapt with new era.
One advice is if u think back 40 years back.....all culture changes. Sex practice changed. Life Style changed, diet changed. Disease pattern changed.alot of things changed. Who changed ? I did not , you did not . Everyone changes it.
Keys words are ' self responsibility ' ' self security measure'
don't just bullshit here.
Nobody will follow ur advice. If you are older 20 years from now, it will happen and still happen and even BE MORE . MORE.
This is ecological evolution. Think back. Read lots of history. Not just read the translated Myanmar books. ...read lots of books from 19 century and the whole 20 century . history books in relation to Human science, life style and geography and sex life and all others.
don't just say what you feel line in your mind in the nick of time and ' say the old rhetoric ' of ' bla bla bla bla ........Maung Neth HnaMa Tar neth Ah Meet .......etc. etc. ..........
Do understand the life and currencies.
Don't try to comment negatively to those models and actors. They are doing their own business and they are part of the country business too.
It will be very lengthy if I say much here.
Sex, pornography , exhibitionism exist for long long time. You can not eradicate.
There are lots of reasons. Even in Nazi time in 30s and 40s . it existed and existed and existed. existed. Better stop now ........
အတိုပြတ် မလုံ့တလုံ မကြိုက်တဲ့သူ ကိုယ်တိုင်လဲ မဝတ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးလဲ မဝတ်အောင် ဆုံးမ
မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ပြီး ကုလားနဲ့ညား၊ တရုတ်နဲ့ညား
အင်္ဂလိပ်နဲ့ ညားတာကြတော့ကောင်းလား။ ကြာရင်လူမျိုးပါပြောက်လိမ့်မယ်။
မြန်မာလိုဝတ် သနပ်ခါးလိမ်း ဆံပင်အရှည်တွေထားပြီး
အွန်လိုင်းက ရီးစားကို ဟိုပြ ဒီပြ မြန်မာမတွေက ကော ယဉ်ကျေးသတဲ့လား
သင်္ကြန်မှာ အတိုဝတ်တာ မလုံ့တလုံ ဝတ်တာ ရာ ဇဝတ်မှုလား။
လူတိုင်းကို ဒေါ်စုလို ရင်ဖုံးဝတ်စေချင်နေကြလား။
သူက ဝတ်မှာပေါ့ သူက ခေါင်းခေါင်ပီသအောင်နေရမယ်လေ။
လူတိုင်းက သန်း၆၀လုံး သူတော်ကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ သိထားကြပါ။
မြန်မာဆန်တာ ကြိုက်ပြီး အမြင်မတူသူကို မအေနှမ ကိုင်တုတ်တဲ့ ငနဲကိုလဲ အံသြက ဗျာ။
ယဉ်ကျေးတဲ့ မြန်မာလူမျိုး အဲလိုပဲ ဆဲရသလား။
ပြီးတော့ မြန်မာကို ကမ္ဘာက သိအောင် မြန်မာ ဝတ်စုံပဲ ဝတ်ရမှာလာ။ နိုင်ငံတိုင်း ကုတ်တွေ နက်တိုင်တွေ ဝတ်တိုင်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ မဟုတ်သလို အတိုဝတ်တိုင်း ဖါသယ်မ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖရုပ်သဝါစာ ပြောဆိုနေသူတွေသာ ရှက်ရမှာ။ ခင်းဗျားတို့ သိရမှာက ဒီခေတ်ခလေးတွေ ခင်းဗျား တို့ မျိုးဆက်ထက်ပိုတော်တယ်။
နိုင်ငံတကာ မှာ ပညာသွားသင်တယ် နည်းပညာသိတယ်။ ကမ္ဘာ မှာ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိတယ်။
မဆလ၊ နအဖ ခေတ်လဲ မဟုတ်တော့ဘူး။
ကျနော်တို့ လုံချည်မဝတ် ထဘီမဝတ်ပဲ အများနည်းတူ ဘောင်ဘီတွေ ဝတ်လဲ ကို့ နိုင်ငံကို ချစ်ကြသူတွေပါ။
ပွဲစားပါစပ်လို၊ ငါးစိမ်းသည်လို ပြောဆိုတာတွေရပ်ပါတော့။
ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ ဆဲရင် အသရေဖျက်မှုနဲ့ တိုင်လို့ရတယ်
အတိုအပြတ်မဝတ်ရဘူးလို့ အများသဘောတူရင် ဥပဒေပြုပေါ့။
ကမ္ဘာမှာ မြန်မာ လူတော် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ၁၀ယောက်တောင်ပြည့်လို့လား
မြန်မာတွေ ဘာထွင်ဖူးလဲ ။
ဦးသန့်နဲ့ ဒေါ်စုကောင်းလို့ မြန်မာ ဆိုပြီး သိနေကြတာ။ တော်ပြီ လက်ညောင်းတယ်
မြန်မာ.ယဉ်ကျေးမူ. နဲ.ပတ်သက်ပြီး ဝေ ဖန်တာတော. ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ဝေဖန်သူတချို.က မယဉ်ကျေးတာတော. မကောင်းပါဘူး ။။။။။။။။
khin said... :
I don't want to say much.
But look at picture, no sexy, no standard.
I susprise why she color, wear like this.
Very bad looking.
The Middle said... :
မင်းသမီးဖခင်မှာနေပြည်တော်တွင် GSM အစည်းအဝေးကိုကျန်းကျန်းမာမာဖြင့်တက်ရာက်လျက်ရှိပါသည်။
မင်းသားကြီး said... :
မင်းသားကြီးဟိုတယ်မှာ တကိုယ်လုံးလိုးရှင်းလိမ်းတဲ့ မင်းသမီးလေးတောင် အဲ့ဒီ ဗွီဒီယိုဖိုင်လေးထွက်လာပြီးမှ ပွင့်လိုက်တဲ့စန်း ရိုက်လိုက်ရတဲ့ ကြော်ငြာ ဘိုင်စကုပ် ကဲ ဘယ်နှယ့်ရှိစ အမောင်မင်းတို့ရေ့
ကလပ်မှာ"လှတယ်ကွာ..ဗိုက်ခေါက်လေးထွက် တာပဲရှိတယ် " ဆိုတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်သေး
ရှင်တွေကအေးဆေးပါပဲ..Who are they? ဆိုတဲ့
Most of the people are still not knowing how to wear the cloths ,and how to look and understand the fashionable . Should be match with when and where. Not in festival. Even European and americans they pay the respect in their culture
အမယ်လေး ငြင်းခုန်နေလိုက်ကြဒါ။ သားတို့ရေ မာမီကဒေါ့ ဘာမှ ပြောချင်တော့ဘူး။ သားတို့ကလည်း တစ်စိတ်ရှိ ငြင်းမယ် ခုန်မယ်။ သင်ဇာတို့လည်း အိုက်တယ် ချွတ်မယ်။ သူ့ဘာသူနေပါစေ သားတို့ရယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနဲ့ သားတို့ရန်တွေဖြစ်နေတာ မာမီမကြည့်ရက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တခုတော့ရှိတယ်။ သင်္ကြန်မှာအဲလိုဖြစ်တာ အရက်ကြောင့်လို့ပြောတဲ့သားရေ၊ သင်္ကြန်မှာအရက်မသောက်ရရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားတရားထိုင်တာပိုကောင်းမယ်ကွယ်။ ညော်တကစ်တယ်ဟယ် ဂယ်ဘဲ
အမှန်တော့အမ၀တ်တာသိပ်မဆန်းပါဘူး။အပြင်မှာလည်းဒီထက်မက ၀တ်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ဒါပေမဲ့အမက မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒီလိုမျိုး မ၀တ်ဆင်သင့်ပါဘူး။Irrawaddy မှတဆင့် အမကိုပြောလို့ရရင်ပြောပေးပါနော်။အမကို အမြဲတမ်းအားပေးနေမယ်လို့။အမ သရုပ်ဆောင်တာ အရမ်းကောင်းတယ်။အမရယ် နောက်ဆို ကိုယ့်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲ အလေးမပေးပါနဲ.နော်။အမ ရဲ.နောက်မှာရှိတဲ့အမကို ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပဲ စဉ်းစားပေးပါနော်။အမဒီထက်မက အောင်မြင်မှုတွေ၊ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရရှိပါစေလို့ ညီမ စိတ်ရင်းနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။အမကို အရမ်းချစ်တယ်။
Emm why some people say that we should go to some foreign country and look what some ladies wear??
Whatever the country, the ladies wear like that are called sluts. It is not about fashion or trend. please dun say it is fashion and that every lady around the world wear like that. actually only sluts wear things like that. many people know that thinzar isawhore already. ladies, please dun wear likeawhore.
မြန်မာအစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ အစိုးရအလိုကျ ဖော်လံဖားခဲ့ကြတဲ့ သူတွေ နောက်ထပ် ၄၂ ဦးကို အမေရိကန်နိုင်ငံက ဘဏ္ဍာရေးဆို...